မူဘာရက် အာဏာ စွန့် သည်အထိ ဆက်လက်ဆန္ဒပြ မည် | Freedom News Group
မူဘာရက် အာဏာ စွန့် သည်အထိ ဆက်လက်ဆန္ဒပြ မည်
by FNG on January 30, 2011	နိုဘဲလ် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုရှင် မိုဟာမက် အယ်(လ)ဘရာဒီ က ဆန္ဒပြ သူများ ကို မိန့် ခွန်းပြော
အီဂျစ် နိုင်ငံ တွင် ညမထွက် ရ အမိန့် ကို နေ့ လည် ၃ နာရီ မှ မနက် ၈ နာရီ ထိ တိုးမြှင့်
မှုကြောင့် နေ့ ရောညပါ မထွက်ရ အမိန့် ဖြစ်
မူဘာရက် ဆန့် ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲ များ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ပျံနှံ နေရာ ပုံတွင် လက်ဘနွန် နိုင်ငံ ဘေရွတ် မြို့ မှ မူဘာရက် ဆန့် ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲ တစ်ခု Photo-AFP Egyptian demonstrators demanding the ouster of President Hosni Mubarak shouts slogans on top of Egyptian army tanks in Cairo on January 29, 2011. AFP PHOTO/MOHAMMED ABED (Photo credit should read MOHAMMED ABED/AFP/Getty Images)
အစိုးရ အဖွဲ့ အပြောင်းအလဲ မှာ ပြည်သူများ အလိုကျမဟုတ် အမေရိကန် အလိုကျသာဖြစ်
Moment of Truth for U.S. (Wall Street Journal) အီဂျစ် နိုင်ငံတ၀ှမ်း ဆန္ဒပြမှု တွေ စတင်တဲ့ ခြောက်ရက်မြောက် နေ့ နဲ့ အထွေထွေ သပိတ်ရဲ့ သုံး
ရက် မြောက် နေ့ မှာတော့ နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကြာ အာဏာကို ထိန်းချုပ် လာတဲ့ အီဂျစ် သမ္မတ ဟိုစနီ
မူဘာရက် ဟာ သူ့ ရဲ့ သမ္မတ ရာထူးနေရာ နဲ့ တိုင်း ပြည်ခေါင်းဆောင် နေရာ တွေ ကို ဆက်ပြီး
ထိမ်းထား ဖို့ မလွယ်ကူတော့ ကြောင့် အီဂျစ် နိုင်ငံ မှာ ရောက် နေတဲ့နိုင်ငံတကာ သတင်းထောက်
တွေ က သုံးသပ်ကြပါတယ်။
မြို့ တော် ကိုင်ရို မှာတော့ ဆန္ဒပြ သူတွေ ဟာ အရင်နေ့ တွေ ကထက် ပိုများ လာပြီး ရဲစခန်း
တွေ ကို ၀င်ရောက် စီးနင်းမှု တွေ ကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်တွေ လည်း စခန်း ကို စွန့် ခွာ ထွက်ပြေး
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ရှင် တွေ နဲ့ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝ သူတွေ ကလည်း အီဂျစ် နိုင်ငံ ကို စွန့် ခွာ
ထွက်ပြေးကြရာမှာ ဒူဘိုင်း၊ ကာတာ စတဲ့ နိုင်ငံ တွေ ကို ၎င်း တို့ ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် လေယာဉ်တွေ
နဲ့ စွန့် ခွာထွက်ပြေး ကြတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီနေ့ ညမှာတော့ ဆန္ဒပြသူတွေ ဟာ ကိုင်ရို မြို့ လယ်က နိုင်းမြစ်ဝှမ်း တစ်လျှောက် ချီတက်
ဆန္ဒပြ ကြပြီး အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရား တွေ ရပ်တန့် သွား အောင် အစိုးရ ရုံး အချို့ ကို လည်း
နိုင်ငံရဲ့ ဒုတိယ မြို့ တော် ဖြစ်တဲ့ အလက်ဇန္ဒြီးယား မြို့ မှာ တော့ စစ်သား တွေ ဟာ ဆန္ဒပြ
သူတွေ ကို ပစ်ခတ် လိုကြစိတ် မရှိ ဘဲ အရေးကြီး တဲ့ နေရာ တွေ မှာ အသင့်အနေအထား
နဲ့ သာ ရှိနေကြပါတယ်။
ဆန္ဒပြမှု တွေ အတွင်းမှာ ၈၀ ကျော် သေဆုံး ခဲ့ပြီး ၁၀၀၀ ကျော်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပေမယ့် အာ
ဏာရှင် မူဘာရက်ကတော့ အာဏာစွန့် မယ့် ပုံ မပေါ်သေးပါဘူး။
နိုင်ငံတကာမှာ ရှိ တဲ့ အီဂျစ် သံရုံး တွေ အရှေ့ မှာ လည်း မူဘာရက် ကို ဆန့် ကျင် ဆန္ဒပြနေ
Who is the Omar Suleiman Spy Chiefs as Vice President ဇန်န၀ါရီလ ၂၈ ရက်နေ့ မှာ တော့ မူဘာရက် က ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲ အိုမာ
ဆူလေမန် ကို ဒုသမ္မတ အဖြစ်ခန့် အပ်ခဲ့ပါတယ်။ အိုမာ ဆူလေမန် ကို သူ့ နေရာ
ဆက်ခံမယ့် ဒုသမ္မတ အဖြစ် ခန့် အပ်ခြင်းဟာ ဆန္ဒပြသူတွေ နဲ့ အဆင်ပြေစေဖို့ ထက်
အမေရိကန် ကို မျက်နှာလို မျက်နှာရ လုပ်လိုက် ခြင်းသာ ဖြစ်တယ်လို့ နိုင်ငံ တကာ
အကျပ်အတည်း လေ့လာရေး ဌာန က သတင်း ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
အိုမာ ဆူလေမန် ဟာ ၁၉၉၃ ခုနှစ် က စပြီး အခုအချိန် ထိ အီဂျစ် ထောက်လှမ်းရေး ဌာန
ရဲ့ အကြီးအကဲ အဖြစ်တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး အယ်ကာယီဒါ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့ ရဲ့ ထိပ်
တန်း ခေါင်းဆောင် တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာ အေဇမန် အယ်(လ)ဇ၀ါဟီရိ ရဲ့ အီဂျစ် အယ်
(လ)ကာယီဒါ ကွန်ယက် ကို ဖြိုဖျက် နိုင် အောင် စွမ်းဆောင် နိုင်ခဲ့သူ တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
အိုမာ ဆူလေမန် ဟာ အီဂျစ် နိုင်ငံမှာ သာမက အရှေ့ အလယ်ပိုင်းမှာပါ အရေးပါတဲ့ ထောက်
လှမ်းရေး အကြီး အကဲ ဟောင်း ဖြစ်ပြီး အမေရိကန် အရာရှိ တွေ နဲ့ ဆက်ဆံ ရေး ကောင်းသူ
တစ်ယောက် လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ ကို ၁၉၃၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ မှာ မွေး ဖွား ခဲ့ပြီး ယခင် ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စုမှာ စစ်ပညာ
သင်ကြားခဲ့ကာ ကိုင်ရို မြို့ က အင်ရှန် တက္ကသိုလ် က နေ နိုင်ငံရေး သိပ္ပံ နဲ့ ဘွဲ့ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
၁၉၈၂ ခု နှစ် မှာတော့ အီဂျစ် စစ်တပ် ကနေ ဗိုလ်မှုးချုပ်ရာ ထူးနဲ့ထောက်လှမ်းရေးဌာန
ကို ပြောင်းရွှေ့ ခဲ့ပါတယ်။
မူဘာရက် ရဲ့ ညာလက်ရုံး အဖြစ် အနှစ် နှစ်ဆယ်ခန့်တိုင်းပြည်တွင်းက ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှား
သူတွေ ကို နှိပ် ကွပ် ခဲ့သူ ဖြစ်ပေမယ် အမေရိကန် အစိုးရ က သဘောကျ ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခင်လေတပ် ၀န်ကြီး ဟောင်း ကို တော့ မူဘာရက် က ၀န်ကြီးချုပ် အဖြစ်တာဝန် ပေး
အတိုက် အခံတွေ သဘောမကျ
လက်ရှိ အီဂျစ် နိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာ နဲ့ ပတ် သက်ပြီး အမေရိကန် ရဲ့ ပြုမူ ပုံ တွေ ကို အား
မရ ကြောင်း နဲ့ စိတ်ပျက်မိကြောင်း ကို အိုင်အေအကြီး အကဲ က ပြောပါတယ်။ အီဂျစ် နိုင်ငံ
နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန် ရဲ့ပြုမူ ပုံတွေ ကို အမေရိကန် မီဒီယာ တွေ ကပါဝေဖန် နေကြ
Tags: Cairo, Egypt, Egyptian Army, Hosni Mubarak, Omar Suleiman, Wall Street Journal	From: သတင်း, ပြည်ပသတင်း	← နိုဘဲလ် ဆုရှင် ဦးဆောင်မှု ဖြင့် အီဂျစ် တော်လှန် ရေး အောင်မြင်မှု ဆီလှမ်း
ချောဆွဲလာသည့် ကားကို တိုက်ခိုက်ရာ နအဖ တပ်မှုးများ ဒဏ်ရာရ →
how to make democracy in Burma road map
by Ray San on Sunday, January 30, 2011 at 9:43pm
1. share this information with those who are your friend and tell your friend also to pass this road map to their friend so this will spread likeafire in the forest
2.tell to your friends and yourself that you are hero of Burma so that you can changeaBurma (i know it ,you are ready for this)
3. Drive your fear and your friend by explain this “there has no prison where can keep 20000 people and there has no solider who dare to shoot 10000 people who has no Gun and if solider shoot people then United nation will come sure for help so spread suchaidea toayouth people who live in Burma and tell them they are really hero of Burma”
4.disscuss about demoracy with your friend “to example ” what is democracy ?what can be different without democracy and with democracy? who can lead democcracy moment? and how will do if leader has been capture? the solution is you all are leader, one fall two will arise , two fall4will arise ,the unity of people
5.find the target one of the General and caputre him or pursue him and use his army to against Than Shwe army ( this can really happen if all people support him and make him hero of Burma)
6.pray to God whom your worship so that may the spirit will arouse all people mine like in egypt
7. Connect with all who are fighting for justice and right such as KIO,KIA, KDA,DKBA;KNU, all party
8.Tell to all “All men are born free and equal in dignity and rights” even tell to milatary and appointatime with your friend and start begin
9.Here is your victory come
January 31, 2011	UFL	#
right baby SOS
January 30, 2011	SOS Myanmar	#
တင့်ကားပေါ်တက်ပြီးဆန္ဒပြတဲ့ ပုံ နဲ့ ဒီပြင့် ပုံတွေ ရှာထည့်ပေးတာ ၊ အမေရိကန် ရဲ့ ကမ္မာဌာန်း ရုပ်ကို
လှစ်ပြ လိုက်တာတွေ ၊ စုံစုံလင်လင် တင်ပေးတာတွေ ဟာ တကယ်ကို မီဒီယာ တာဝန် ကျေပါပေတယ်
ဗျာ… FNG is CNN of Burma January 30, 2011	ဘဘကြီး	#
အမေရိကန်အစိုးရဟာ သူ့ ရဲ့ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွား ကိုသာအဓိကထားလေ့ရှိပါတယ်။လူကြားကောင်းအောင်တော့ ဒီမိုကရေစီ ၊ လူ့ အခွင့်အရေး စတာတွေ အော်ဟစ်ပြလေ့ ရှိပါတယ်။ ကွန်မြူနစ် စနစ် ကို ရော ၊ ဖက်ဆစ် စနစ် ကိုရော ၊ ဘယ်အာဏာရှင်မျိုး ကိုမှ ၊ အဲ့ဒီစနစ်မျိုးအောက်က ပြည်သူလူထု ဖက် တကယ်ရပ်ပြီး ၊ ထိထိရောက်ရောက်
ကူညီတွန်းလှန်တာမျိုး မရှိ ပဲ ၊ မိမိအကျိုးစီးပွား နဲ့ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်မှသာ ၊ ၀င်ပါလေ့ရှိတတ်တာဖြစ်တယ်။ သူကိုယ်တိုင် အားပေးထားတဲ့ အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေ အများကြီး ဆိုတာ ငြင်းမရပါဘူး။
ဒါကို မြန်မာတွေ ကောင်းကောင်းကြိုသဘောပေါက်ထားကြဖို့ လိုပါတယ်။
စိတ်ကူးမယဉ်မိကြဖို့နဲ့အသုံးချခံသက်သက်ဘ၀ မရောက်ရအောင် သတိထားကြဖို့ လိုပါတယ်။
အမေရိကန်အစိုးရ ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝါဒ ဆိုတာ မြန်မာပြည် နဲ့ ပတ်သက်လို့ တိတိပပ စလို့ပေါ်တာ
မနေ့ တနေ့ ကမှပါ။
အဲ့ဒီ အမေရိကန်အစိုးရ ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝါဒ ကိုလဲ ၊ ဘယ်ဖက်ကရပ်ရပ် ၊ ကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်အောင်
ိတိုင်းပြည်က ခပ်နဲ့ နဲ့ ရယ်ပါ။
တိုင်းတပါးသား က ဒီအခွင့်ဒီအခါ စောင့်နေတာပဲ ဆိုတာကိုလဲကြိုမြင်တတ်ကြဖို့ လိုပါတယ်။
အတိတ်သမိုင်းကို နိုင်ငံတကာအမြင် နဲ့ ယှဉ်ပြီး ချိန်ဆတတ်ကြပါစေ။
January 30, 2011	kayan	#
နှစ်ပေါင်းများစွာရောက်ခဲ့ကြရတာ။ တစ်ကယ်တော့သူ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးဗျ။ ကျုပ်
January 30, 2011	Comments are closed.
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,516,858 hits
Stunning Nude Photo Series Challenges What It Means To Be 'Attractive' (NSFW) huff.to/1f2KHxk via @HuffPostArts 13 hours ago
I saw my reflection inaglass door of Michael Mann studio at Santa Monica, wow I was young enough. Photography by D… lnkd.in/bKVcdAu 1 day ago
#Nelson Mandela should born and raise in Utah. lnkd.in/b-mPUbP 1 day ago
Follow @freedomnews_usFNG ၏ သတင်း နှင့် ဖော်ပြ ထား မှု များ ကို ပြန်လည် ဖတ်ရှုရန် Select Month December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 FNG LATE NIGHT SHOW Myanmar News in EnglishMyanmar's president asks Philippines for more aidMyanmar to allow foreign banks to begin some operations next yearMyanmar's president calls for more investment, development aid from PhilippinesMyanmar refugees face land challenges on returnUndergrads return to crumbling Myanmar universityMyanmar President cites Pinoy resiliencySpecial Report: Thailand secretly supplies Myanmar refugees to trafficking ringsUS seeks limited military ties with MyanmarWant Burma info in your inbox each morning?